၅မိနစ်ပြော ၂၅မိနစ်ရယူနိုင်မည့်အစီအစဉ် | Telenor Myanmar
အစီအစဉ် နှင့် ပရိုမိုးရှင်းများ
ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နှင့် SMS ပေးပို့ခြင်း
စတား Postpaid အစီအစဉ်
တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်​ အရမ်းတန်တဲ့​​အစီအစဉ်​! ပထမ ၅ မိနစ်စာ အတွက်​ တစ်​မိနစ်​၂၇ကျပ်​သာပေးပြီး နောက်ထပ်၂၅ မိနစ် ကို အခမဲ့ဖုန်းပြောနိုင်​ပါပြီ။
၅၀၀ သို့ "ON525" ဟုစာတိုပေးပို့ပါ။
Prepaid သုံးစွဲသူများအားလုံး အတွက်အကျုံးဝင်ပါသည်။
သုံးစွဲသူမှ *5251# ကိုခေါ်ဆိုပြီး လက်ဆောင်ရယူနိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများ မှ တယ်လီနော် အချင်းချင်း (၅) မိနစ် ဆက်တိုက်ခေါ်ဆိုပြီး ပိုပြော သော (၂၅) မိနစ်ကို ဆက်တိုက် ဖုန်းခေါ်ဆို မှုအတွင်း အခမဲ့ပြောဆိုနိုင် မည့်အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူအတွက် ဆက်တိုက်ခေါ်ဆိုပြီး နောက်ထပ် အပို မိနစ် ရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်က အမြဲရရှိနေမှာဖြစ် ပြီး အစီအစဉ် ကို ရပ်တန့်လိုပါက *5250# ကိုရိုက်နှိပ် ခေါ်ဆိုနိုင် ပါသည်။
အခြားဖုန်းပြောဆိုမှုအစီအစဉ်များရယူထားပါက ၅မိနစ်ပြောပြီး ၂၅မိနစ်လက်ဆောင် အစီစဉ်မရရှိနိုင်ပါ။(သို့) ၅မိနစ်ပြောပြီး ၂၅မိနစ်လက်ဆောင် အစီစဉ်ရယူထားပါက အခြားဖုန်းပြောဆိုမှုအစီအစဉ်များ ဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။
သုံးစွဲသူမှာ “သာသာယာယာ” အစီအစဉ် ကိုရယူ ထားသူဖြစ်ပါက ပထမ (၅) မိနစ်ကို တစ်မိနစ် ၂၇ ကျပ်နှုန်းထား နဲ့ ဖြတ်တောက် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနောအချင်းချင်း ၅မိနစ်ပြောပြီး ၂၅မိနစ် လက်ဆောင် အစီအစဉ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
သုံးစွဲသူမှ ၅ မိနစ် (သို့) ၅ မိနစ် နှင့်အထက် တယ်လီနော် အချင်းချင်း မိနစ် (၃၀) အထိ ဆက်တိုက် ဖုန်း ခေါ်ဆိုပါက ပထမ (၅) မိနစ် အတွက်သာ တစ်မိနစ် ၂၇ကျပ် နှုန်းထားနဲ့ ဖြတ်တောက်မည် ဖြစ်ပြီး နောက်ကျန်ရှိ သော ၂၅ မိနစ် ကို တစ်ဆက်တည်း ခေါ်ဆိုမှု အတွင်း အခမဲ့ ပြောဆိုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
တယ်လီနောအချင်းချင်း ၅မိနစ်ပြောပြီး ၂၅မိနစ် လက်ဆောင် အစီအစဉ် ကို ဘယ်လိုပါ၀င်ရမလဲ။
အစီအစဉ် ကိုရရှိရန် *5251# ကိုဖုန်းခေါ်ဆို၍ (သို့) 500 ကို ON525 ဟုစာတိုပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
ဤအစီအစဉ် ကိုပါဝင်ပါက ဘယ်လောက် ကျသင့်ပါမှာလဲ။
ပထမ (၅) မိနစ်ကို တစ်မိနစ် ၂၇ ကျပ်နှုန်းထား နဲ့ဖြတ်တောက် သွားမှာဖြစ် ပြီး နောက် တစ်ဆက်တည်း ခေါ်ဆိုမှု ၂၅ မိနစ်ကို အခမဲ့ ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုဆုရယူနိုင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ရမည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မှာ တစ်ခါတည်း တစ်ဆက်တည်း ပြည့်မှီအောင်ခေါ်ဆို ရမှာလား။
တစ်ဆက်တည်း ခေါ်ဆို မှု လိုအပ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများ မှ တယ်လီနော် အချင်းချင်း (၅) မိနစ် ဆက်တိုက်ခေါ်ဆိုပြီး နောက်ထပ် အပို(၂၅) မိနစ် ကို ဆက်တိုက် ဖုန်းခေါ်ဆို မှုအတွင်း အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မှာပါ။
ရရှိ နိုင်မည့် လက်ဆောင် သတ်တမ်း က ဘယ်အချိန်ထိလဲ။
လက်ဆောင် သတ်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန် မရှိပါ။ သုံးစွဲသူ အနေနဲ့ အစီအစဉ်ကို ရယူပီးသည့် အချိန်မှစ၍ တယ်လီနော် အချင်းချင်း (၅) မိနစ် ဆက်တိုက်ခေါ်ဆိုပြီတိုင်း နောက်ထပ် အပို(၂၅) မိနစ် ကို ဆက်တိုက် ဖုန်းခေါ်ဆို မှုအတွင်အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မှာပါ။
ရရှိ ထားသော အစီအစဉ် ကို ဘယ်လို ရပ်တန့်ရမလဲ။
အစီအစဉ် ကို ပယ်ဖျက်ရန် *5250# ကိုဖုန်းခေါ်ဆို၍ (သို့) 500 ကို OFF525 ဟုစာတိုပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
အစီအစဉ်က ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိလဲ။
ယခုပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ အောက်တိုဘာလ (22) ရက်နေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းမကြေငြာခင်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနောအချင်းချင်း ၅မိနစ်ပြောပြီး ၂၅မိနစ် လက်ဆောင် အစီအစဉ် ကို ဘာလို့မရနိုင်တာလဲ ?
အခြားဖုန်းပြောဆိုမှုအစီအစဉ် သက်တမ်းကျန်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်ကိုရယူလိုပါက ယခင်လက်ကျန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်ကုန်ဆုံးသွားသည့် အချိန်ထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုပါမည်။
အခြားဖုန်းပြောဆိုမှုအစီအစဉ် ကိုဘာလို့ ဝယ်ယူမရနိုင်တာလဲ
တယ်လီနောအချင်းချင်း ၅မိနစ်ပြောပြီး ၂၅မိနစ် လက်ဆောင် အစီအစဉ် ကိုရယူထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်ရယူလိုပါက *5250# ကိုခေါ်ဆိုပြီး “၅မိနစ်ပြောပြီး ၂၅မိနစ်ရယူနိုင်သည့်အစီအစဉ်"ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲသူမှာ “သာသာယာယာ” အစီအစဉ် ကိုရယူ ထားသူဖြစ်ပြီး ယခု အစီအစဉ် ကိုရယူလိုက် ပါက တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆို မှုများ ဘယ်လို ကျသင့် သွားမှာလဲ။
သုံးစွဲသူမှာ “သာသာယာယာ” အစီအစဉ် ကိုရယူ ထားသူဖြစ်ပါက ပထမ (၅) မိနစ်ကို တစ်မိနစ် ၂၇ ကျပ်နှုန်းထားနဲ့ ဖြတ်တောက် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
© Copyright 2018 All rights reserved by Telenor Myanmar.
သင့်ရဲ့ OTP ကိုဘယ်သူ့မှမပြနဲ့နော်
တစ်​ခါသုံးလျှို့ဝှက်​ကုတ်​ OTP ဆိုတာဟာ log-in တစ်​ကြိမ်​ဝင်​​ရောက်​ရန်​အသုံးပြုတဲ့ကုတ်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ မည်သည့်တယ်​လီ​နောဝန်​ထမ်​းကမှ လူကြီးမင်​းရဲ့ တစ်​ခါသုံးလျှို့ဝှက်​ကုတ်​ကို ဖုန်​းဆက်​​မေးမြန်​းမှာ မဟုတ်​တာကို သတိပြု​ပေးပါ။